China Signage ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | Donghua
Dị fechaa na inogide karịa metal ma ọ bụ osisi ịrịba ama, plastic ịrịba ama nwere ike idi ọnọdụ n'èzí na di ntakiri fading, cracking, ma ọ bụ mbibi. Na plastik enwere ike ịkpụzi ma ọ bụ mezie ya ka ọ bụrụ nkọwapụta chọrọ maka ngosipụta ma ọ bụ akara ma nwee ike rụpụta ya n'ọtụtụ ụdị agba agba. Dhua na-enye acrylic plastic sheet sheet for signage ma na-enye omenakwa omenala.
• Channel ịrịba ama akara
• Ihe ịrịba ama eletriki
• Ihe ịrịba ama nke ime ụlọ
• Ihe ngosi LED
• Mbadamba menu
• Ihe ịrịba ama Neon
• Ihe ịrịba ama dị n’èzí
• Ihe ịrịba ama Thermoformed
• signschọgharị ihe ịrịba ama
Ihe nrịbama sitere na DHUA na-ekpuchi bọọdụ mkpọsa, akara akara, akara ngosi ụlọ ahịa na-ere ahịa na ngosipụta mgbasa ozi ọdụ ụgbọ. Ngwaahịa ndị a na-ahụkarị na-agụnye akara ndị a na-ahụ anya, bọọdụ mkpọsa dijitalụ, ihe nlere vidiyo na akara ngosi neon. Dhua na-enyekarị ihe acrylic nke dị na ọkọlọtọ, na mpempe akwụkwọ na ịkpụ akwa maka ntinye akara.
Ihe ịrịba ama acrylic bụ mpempe akwụkwọ plastik nke na-egbuke egbuke. Ọ na-abịa na ọtụtụ dị iche iche na agba gụnyere frosted na doro anya. Signdị ihe ịrịba ama a dị nfe ma sie ike maka mpụga na ime ụlọ. Ọ dịkwa oke mgbanwe iji daba nso ụdị ọ bụla. E nwere ọtụtụ ojiji dị iche iche nke na-eme ka nke a bụrụ ihe ama ama.